हरिण शिकार मुद्दामा सलमान खान दोषी ठहर - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
हरिण शिकार मुद्दामा सलमान खान दोषी ठहर
Published On : २२ चैत्र २०७४, बिहीबार ०७:५४
करिब २० वर्ष पुरानो कालो हरिणको शिकार गरेको मामलामा बलिउड कलाकार सलमान खान दोषी पाइएका छन्। सन् १९९८ मा जोधपुरको ग्रामीण इलाकामा दुई हरिणको शिकार गरेको आरोपमा सलमान लगायत पाँचजना विरुद्ध वैष्णोइ समाजले मुद्दा हालेको थियो।
सलमान खानका साथै अभिनेता सैफअलि खान, अभिनेत्री सोनाली बेन्द्रे, तब्बू र नीलमविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो। जोधपुर अदालतले बिहीबार सलमान खानलाई दोषी करार गरेको हो भने अन्यलाई सफाइ दिएको छ। सलमान खानका वकीलले अदालतमा तीन वर्षभन्दा कमको सजाय माग गरेका छन्। उनीहरू २० वर्ष पहिले ‘हम साथ-साथ हैं’ फिल्म सुटिङका लागि जोधपुर गएका बेला शिकार खेलेका थिए।
यो मुद्दा भारतको वन्यजन्तु कानुन अन्तर्गत दर्ता गरिएको थियो। जसमा दोषी पाइएकालाई छ वर्ष सम्मको जेल सजायको प्रावधान रहेको छ। सलमान खानले भने आफूमाथि लगाइएको आरोप निराधार रहेको बताएका छन्। उनका वकीलले सलमानलाई फसाइएको बताएका छन्।
सलमान खान आफ्नी दुई बहिनीसँग अहिले जोधपुरको अदालतमा नै छन्। उनलाई केहीबेरमा फैसला सुनाउने बताइएको छ। उनका वकीलले तीन वर्षभन्दा कम सजाय दिन आग्रह गरेका छन्।एजेन्सी